Akụkọ - Mmepe na ntinye nke mica synthetic
Mmepe na ntinye nke mica synthetic
Mica bụ aha izugbe silicate mineral, nwere njirimara nke mkpuchi, nghọta, nkwụsi ike ọkụ, nkwụsị corrosion, nkewa dị mfe na nkwụsị na juputara na elasticity. A na-eji ya eme ihe na ihe ịchọ mma, plastik, roba, mkpuchi, mgbochi corrosion, ịchọ mma, ịgbado ọkụ, nkedo, ihe owuwu ụlọ na mpaghara ndị ọzọ, na-arụ ọrụ dị mkpa na akụ na ụba na nchekwa nchekwa.
I. Nyocha na mmepe nke mica synthetic
Dabere na "mica synthetic", na 1887, ndị ọkà mmụta sayensị Russia jiri fluoride mee ihe mpempe akwụkwọ mbụ nke fluoropoly mica site na gbazee; Ka ọ na-erule afọ 1897, Russia mụtara usoro nhazi usoro ịnweta ọrụ. Na 1919, Germany Siemens - ụlọ ọrụ Halske nwetara patent mbụ. nke sịntetik mica; United States nwere nsonaazụ nyocha niile banyere mica synthetic mgbe agha ụwa nke abụọ gasịrị. Ebe ọ bụ na nguzogide okpomọkụ dị elu, ọ bụ ihe dị mkpa nke nchekwa na teknụzụ, United steeti gara n'ihu na-eme nchọpụta n'akụkụ a.
Na mbido mbụ pg China, mica nkịtị nwere ike mejuo akụ na ụba mba na mmepe. Agbanyeghị, site na mmepe ngwa ngwa nke ike, ụlọ ọrụ aerospace, mica nkịtị enweghịzi ike iru ihe achọrọ. Fọdụ ụlọ ọrụ ndị China bidoro ịmụ mica sịntetik.
Researchlọ ọrụ nyocha sayensị tinyere ụlọ akwụkwọ, gọọmentị na ụlọ ọrụ na-eme nyocha na mmepụta nke mica synthetic batara n'oge tozuru etozu.
II. Uru nke mica synthetic ma e jiri ya tụnyere mica
(1) Anụ quality ruru otu usoro na hà nke akụrụngwa
(2) High-adị ọcha & mkpuchi; ọ dịghị onye radieshon iyi
(3) Obere igwe dị arọ, zute ọkọlọtọ steeti Europe na United.
(4) Nnukwu ihe na-acha ọcha na ọcha (> 92), ihe eji acha odo odo.
(5) Ihe nke peal na ink kristal
III. Iji ya eme ihe nke mica
Na mica ụlọ ọrụ, ọ dị mkpa iji ojiji nke mica scrap n'akụkụ nnukwu mpempe akwụkwọ mica Nke a bụ ọrụ zuru ezu nke sịntetik mica dị ka ihe ndị na-esonụ:
(1) synthesize mica ntụ ntụ
Atụmatụ: Ezigbo ịmịgharị, mkpuchi siri ike na adhesion.
Ngwa: mkpuchi, seramiiki, mgbochi corrosion na chemical ụlọ ọrụ.
Huajing synthetic mica nwere ihe owuwu zuru oke, nghọta na oke akụkụ, nke kachasị mma nke pearl pig.
(2) Sịntetik mica ceramik
Sịntetik mica ceramik bụ ụdị ihe mejupụtara, nke nwere uru nke mica, ceramics na plastik. Ọ nwere nkwụsi ike akụkụ, mkpuchi dị mma, na mgbochi okpomọkụ.
(3) Nkedo ngwaahịa
Ọ bụ ọhụrụ ụdị inorganic mkpuchi ihe onwunwe na elu okpomọkụ na-eguzogide, na mgbochi corrosion.
Advantage: elu mkpuchi ihe, ike n'ibu, radieshon na-eguzogide, ọxịdashọn na-eguzogide na na.
(4) Sịntetik mica eletriki kpo oku
Nke a bụ ihe arụ ọrụ ọhụụ, nke emere site na ịpị oyi akwa ihe nkiri semiconductor na mpempe akwụkwọ mica synthetic. Dị ka ihe eji arụ ọrụ maka ngwa ụlọ, ọ na-enweghị anwụrụ na enweghị ụtọ n'okpuru okpomọkụ dị elu, ya mere a na-eji ya eme ihe ma mepụta ngwa ngwa n'oge a.
(5) Sịntetik mica pearl pigmenti
Ebe ọ bụ na mica sịntetik bụ ihe eji aka arụ, akụrụngwa nwere ike ịnwe ezigbo njikwa. Ya mere, ihe dị arọ na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ nwere ike igbochi site na mbido .Ma sịntetik mica nwere nnukwu ịdị ọcha, ọcha, luster, nchekwa, na-adịghị egbu egbu, nchedo gburugburu ebe obibi, na oke okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ .Ọ na-eji ya na mkpuchi, plastic, akpụkpọ anụ, ihe ịchọ mma, akwa, seramiiki, ụlọ na ụlọ ọrụ eji achọ mma. Site na mmepe na-arịwanye elu nke teknụzụ mica synthetic, ọ nwere mmetụta dị ukwuu na ndụ kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ ndị metụtara ya ga-akwalite ngwa ngwa.
Post oge: Sep-08-2020